Ny Baiboly atao indray mitopy maso: Ny Testamenta Vaovao (2)
"Rehefa nampitenenin’Andriamanitra tamin’ny razana fahiny ny mpaminany tamin’ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra ; Izy no nahariany izao tontolo izao." Hebreo 1:1-2
Ny Testamenta Vaovao dia manambara amintsika ny fomba nanatanterahan’Andriamanitra, tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, ireo fampanantenany. Tao amin’i Jesosy sy tamin’ny alalany, Andriamanitra dia nametraka “fanekena vaovao”, miorina amin’ny fahasoavany irery ihany, fahasoavana tsy misy takalony, mba hamonjeny ireo rehetra mino.
Ny Testamenta Vaovao dia manomboka amin’ireo Filazantsara efatra, izay manambara ny vaovao mahafalin’ny fahatongavan’Ilay Zanak’Andriamanitra tety an-tany sy ny asa nataony. Jesosy dia aseho ho Ilay Mpamonjy ireo izay miaiky fa mpanota sy mino Azy. Aorianan’izany ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia mitantara ny niandohan’ny Fiangonana, izay fikambanan’ny mpino rehetra. Avy eo, ireo taratasin’ny apostoly Paoly, Jakoba, Petera, Jaona ary Joda (boky 21) dia manazava ny asa tsy manan-tsahala nataon’i Jesosy, sy ny vokatr’izany ho an’ireo izay mino. Ny boky farany ao amin’ny Baiboly, ny Apokalypsy, dia milaza mialoha ny zavatra hitranga any am-parany, rehefa hasehon’i Jesosy ny fandreseny tanteraka ireo fahefana ratsy rehetra. Ny Filazantsara no ivon’ny fanambaran’Andriamanitra ny tenany amin’ny olona.
Inona moa no tokony hahakasika ahy ao amin’ny Baiboly, io boky tranainy efa ho 2000 taona mahery io? Ny Baiboly dia nosoratan’Ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra tsy niova ary tsy hiova : mbola manan-kery mandraka ankehitriny ny zavatra ambarany amiko momba ny tenany sy ny finiavany hifandray amiko. Mbola manan-kery, satria hatrany am-piandohana ny olona dia tsy nihatsara ara-toe-panahy, ary mbola mitoetra ho mpikomy amin’Andriamanitra. Nefa Andriamanitra te hamerina indray ny fifandraisan’ny olona aminy, te hanafaka antsika amin’ny fanandevozan’ny faharatsiana. Ataony izany ankehitriny, ho an’izay matoky Azy sy mino an’i Jesosy. Tena natao ho antsika marina tokoa izany ny hafatry ny Baiboly.